လူကြိုက်အများဆုံး nootropic Fasoracetam: အဘယ်အရာကိုပေးသလဲ
မတ်လ 7, 2019
1 ။ Fasoracetam ၏သမိုင်းနှင့်ဇာစ်မြစ်
2 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
3 ။ Fasoracetam ၏အံ့သြစရာအကျိုးကျေးဇူးများ
4 ။ Fasoracetam ၏အကြံပြုသောက်သုံးသော
5 ။ Fasoracetam ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
6 ။ အသုံးပြုသူကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Fasoracetam အသုံးပြုခြင်း၏အတွေ့အကြုံ
7 ။ ဘယ်လိုအဘယ်မှာရှိ Fasoracetam Buy မှ
Nootropics Fasoracetam ဦးဆောင်ယူပြီးနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခေတ်ရေစီးကြောင်းယနေ့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာလူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်သုံးပြီးပိုနှစ်သက်ကြောင်းဈေးကွက်ထဲမှာအကျော်ကြားဆုံး nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန်တွင်, သင်ရုံအစားအစာထက်ပိုလိုအပျကွောငျးသဘောတူပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်နေတုန်းပဲအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆက်လက်တည်ရှိဖို့ကြိုးစားနေပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားနေတဲ့အခွအေနေကိုသင်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စင်ကြယ်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုစားရန်ကြိုးစားဘယ်လောက်မထွက်ရအဘယ်သူမျှမအမှု၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်သောအရာသင်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဤလောက၏အတွက်သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံး start သောအချက်မှ overworked ရပေမည်။ အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောမရှိခြင်းပင်ကပိုဆိုးစေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့အားလုံးကိုအချိန်ရုန်းကန် impossible.It ဘေးတွင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင်အဆိုးသင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမရှိဘဲသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောဖြည့်စွက်လိုသတိထားမိကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကျွမ်းကျင်သူများလူသားတွေအတွက်အားနည်းဉာဏစွမ်းရည်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဒီဆေးတွေအတူတက်လာကြပြီ။ သူတို့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားအတွက်သူတို့ကိုကူညီပေမယ့်သူတို့မှာလည်းတဦးတည်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးနေအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှမရှိဘူးမသာ။
ရိုက်ယူခြင်း Fasoracetam သင်မလိုအပ်သောလုံလောက်သောစွမ်းအင်နှင့်ကျန်းမာရှိသည်သေချာအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်မှတဆင့်အာဏာကိုသငျသညျအထောက်အကူပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. Fasoracetam ၏သမိုင်းနှင့်ဇာစ်မြစ်
ဒါ့အပြင် NFC ကို-1, Lam-105 နှင့် NS-105, Fasoracetam အဖြစ်လူသိများ (110958-19-5) အစောပိုင်း 1990s ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး၏ racetam မိသားစုဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်ပထမဦးဆုံးအနိပွန် Shinyaku, သွေးကြောနှောက်များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းအတူတက်လာမယ့်အတွက်ရည်ရွယ်သည်ဟုဂျပန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိသောကွောငျ့ကအဆင့် 200 မှာပျက်ကွက်ပေမယ့်အဆိုပါကုမ္ပဏီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. သုတေသနပြုကျော် $3သန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကနိပွန် Shinyaku ထံမှ Fasoracetam လက်တွေ့ data တွေကိုဝယ်ယူပြီးနောက်၎င်း၏စွန့်ခွာပြီးနောက်, ဖြည့်စွက်စိတ်ဝင်စားကြောင်း Neurofix လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီက 2013 အတွက်ပြန်လည်ခဲ့သည်။ Aevi Genomics ဆေးပညာ Neurofix ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အပေါ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတာစတင်ခဲ့ပြီးအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, ADHD နှင့်လည်းအဘယ်သူ၏အချိုမှု receptor မျိုးရိုးဗီဇ mutated ခဲ့ကြ၏။
2015 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနယူးမူးယစ်ဆေးအစီအစဉ် Fasoracetam ၏ developer များလူသားမြားသညျမိမိတို့အစမ်းသပ်မှုတွေပို့ချစတင်ကိုလည်းပြည်နယ်လိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတင်ပို့ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ Fasoracetam မူးယစ်ဆေးအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သည်ဆိုပါကသုတေသီစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်မထွက်ရလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏အဆင့်2၌တည်ရှိ၏။
ရုံဈေးကွက်ထဲမှာရှိသမျှကို racetams ကဲ့သို့နေဆဲအပြည့်အဝ Fasoracetam ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်အမှုကိုပြုသုတေသနဤနည်းလမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ကွောငျးဖျောပွသ;
ဒါဟာတစ်ဦး inhibitory transmitter ကိုဖြစ်သော gamma-aminobutyric အက်ဆစ်များအတွက် cortex မှာတွေ့ရတဲ့ receptors တိုးပွားစေပါသည်။ Fasoracetam ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ဂါဘမြို့သားပမာဏကိုတိုးမြှင့်အရှင်ဂါဘမြို့သား-B က receptors '' လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။
ဒါ့အပြင်အချိုမှုဂါဘမြို့သားရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်သင်ယူမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် inhibitory neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေ, အိပ်ပျော်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်ငြိမ်သက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒါဟာဦးနှောက် cortex ကနေဖြန့်ချိ acetylcholine ပမာဏကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Acetylcholine thebrain တှငျတှေ့နှင့်သူ၏တာဝန်မှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှုနှင့်ယေဘုယျသိမှတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သော neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ Fasoracetam ကိုလည်း hippocampus နှင့် cortex အတွက် choline ၏လွှာမှတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦး cholinergic အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ Choline ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံး acetylcholine ၏ဖန်တီးမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအာဟာရဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ cholinergic အရေးယူ Fasoracetam နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ပါဘူးမသာ, ဒါပေမယ့်လည်း aniracetam, piracetam နှင့် racetam မိသားစု၌တွေ့ရှိသမျှသည်အခြားသော nootropics နှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သိမှတ်ခံစားမှုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်တစ်ဦးသိသိသာသာတိုးတက်မှုအောင်အတွက်လူသိများကြသည်။ တစ်ခါတလေသူကကုန်ခမ်းရရှိသောအချက်မှခန္ဓာကိုယ်အတွက် choline အဘို့အမြင့်မားသောဝယ်လိုအားရှိပေမည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကအနိမ့်စိတ်ဓါတ်များ, ဦးနှောက်မြူနှင့်ခေါင်းကိုက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, သင်ဖြည့်စွက် choline ယူနိုင်ဘူး။
အခြားသောနည်းလမ်းရသော Fasoracetam အလုပ် အဆိုပါ metabotropic အချိုမှု receptors (mGluRs) အဖြစ်လူသိများချိုမှု receptors အချို့အမျိုးအစားများကိုသက်ဝင်ဖွငျ့ဖွစျသညျ။ mGluRs သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အပါအဝင်ဦးနှောက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်။ လူအားလုံးတို့သည်ရှစ်သိ mGluRs သူတို့ထဲကနှစ်ယောက်အာရုံကြောစိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွားလာနှင့်အတူဟန်ချက်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်လက်၌လက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အခြားခြောက်လ mGluRs အာရုံကြောစိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချခြင်းဖြင့် neurotoxicity ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချအတွက်ကူညီပေးသည်။ အချိုမှုကအရေးပါ excitatory neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိုမှုတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုရှိတဲ့အခါ, တဦးတည်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းထံမှခံရစေခြင်းငှါ, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ, schizophrenia, ADHD, စိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့် neurodegenerative မမှန်, ဥပမာ, အအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ။
တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုမိလေ့လာမှုများမှာတော့ Fasoracetam အောင်မြင်စွာဤအရပ်မှဦးနှောက်ထဲမှာအချိုမှုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်နှစ်ခု inhibitory mGluRs ၏ function ကို restore သက်သေပြခဲ့သည်။ အခြားအခြေအနေများတွင်, Fasoracetam အရှင်တပြင်လုံးကိုအချိုမှုစနစ်ချိန်ခွင်လျှာ၏ပွနျလညျထူထောငျဖို့ဦးဆောင်အပေါငျးတို့သ metabotropic အချိုမှု receptors ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါက Fasoracetam ADHD ရှိတယ်လို့သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးအကျိုးရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်း, ရုံလှုံ့ဆော်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မပါဘဲအနိမ့်အချိုမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ Fasoracetam အလားတူရလာဒ်များပေးရသုံးပစ်မှတ် receptors အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကမပထမဦးဆုံးအရာကဤအရပ်သည်၎င်း၏အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်အတွက် choline neurotransmitter အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒုတိယအကြောင့်ဂါဘမြို့သား receptors တွေရဲ့အရေအတွက်ထဲမှာတိုးလှုံ့ဆော်နှင့်နောက်ဆုံးပြုလုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအချိုမှု receptors ပွောငျးလဲ။ ဤအလုပ်ရပ်များအားလုံးသည် Fasoracetam အသုံးပြုသူများသည်၏သိမြင်မှုစွမ်းရည်အတွက်တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်။
3. Fasoracetam ၏အံ့သြစရာအကျိုးကျေးဇူးများ
Fasoracetam အပေါ်တစ်ဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု၏စင်မြင့် 1 နှင့်ဇာတ်စင် 11 အပေါ်ပြုမိအမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်အများစု legit ဖြစ်ကြသည်။ ရဲ့ကစားပွဲပေါ်ဖြစ်စေသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာတစ်ဦးထက်ပိုလေးနက်တဲ့ကြည့်ကြရအောင်။
ယနေ့ ADHD လူကြီးများရင်ဆိုင်ရသောအရှိဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူအများစုကသူတို့အာရုံကို span ၏ကျုံ့ဦးဆောင်သည့်တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားတာဝန်များကိုအတွက်လုပ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Fasoracetam အများဆုံး ADHD လူနာတွေအတွက်အဓိကဆေးညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာရောဂါလက္ခဏာတွေမှသက်သာရာရစေရန်ထိထိရောက်ရောက်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။ သင်က SARMs ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသိထားပါရှိရမည်အရာအားလုံးကို
ဂါဘမြို့သားများ၏ပြင်းအားအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိ၏နှင့်၎င်း၏ receptors ၏ပြောင်းလဲရှိပါသည်အခါ, တစ်ဦးစိတ်ကျရောဂါစိတ်ခံစားမှုကနေဆငျးရဲခံရပေမည်။ အစွန်းရောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆင်းအေးဆေးထက်အခြားသောကွောငျ့ဤသည်ကား, ဒါကြောင့်လည်း neurogenesis နှင့်အာရုံကြောရငျ့ထိန်းချုပ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏စည်းမျဉ်းများအတွက်တာဝန်ရှိနေသော neuron အသစ်တွေ၏မွေးဖွားလျော့နည်းစေသည်။ neurogenesis သွေးဆောင်နေသည်သောအခါ, ဂါဘမြို့သားစနစ်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိကူညီပေးသည်။
မကြာခဏ Fasoracetam ယူပြီးသင့်ရဲ့အာရုံခြီးမွှောနိုင်ဘူး။ ဒါဟာစိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်းသောအကူအညီမဲ့ကွာ ebbs ။ Fasoracetam စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်ရာ choline ၏လွှာမှအားပေး။ Choline အဆိုပါဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, neurotransmission နှင့် homocysteine ​​များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အကူအညီပေးရန်လူသိများသည်။
ထိုမှတပါး, choline နောက်ထပ်လျင်မြန်စွာအာရုံကြောမက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လွှင့်ကူညီပေးဖို့အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်ကစုပ်ယူသော acetylcholine မှဖန်တီးသည်။ Acetylcholine ကြောင့်ရွှင်လန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်တည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်ကူညီပေးသည်ဆိုလိုတာကတုံ့ပြန်မှုများ၏ဥတုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ထိပ်တန်းကျောင်းသားများနှင့်နှေးကွေးသောသူတို့သညျအကြားခြားနားချက်ကောင်းသောသင်ယူသူရှိသည်သောကောင်းသောသိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းရဲ့သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာသင်ယူခြင်း, တိုးတက်ကြသောအခါ။ သငျသညျ Fasoracetam ကိုအသုံးပြုဖို့ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များတိုးမြှင်ရ, သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုခိုင်ခံ့စေလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏ cholinergic ပံ့ပိုးမှတဆင့်အသစ်သောအချက်အလက်များ၏ထိရောက် encoding ကတက်အမြန်နှုန်း။
Fasoracetam အဆိုပါ dendritic ကွန်ယက်၏ကျဆင်းမှုတားဆီးကူညီပေးသည်ဖြစ်သောဦးနှောက်ထဲမှာ choline ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအမြန်နှောက်ဇီဝြဖစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Fasoracetam ၏စားသုံးမှုကုသမှုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားအထူးသဖြင့်လာသောအခါစွမ်းအင်အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အစွမ်းထက် Anxiolytic Properties ကိုရှိပါတယ်
၎င်း၏ဇီဝကမ္မအဆင့်ဆင့်၌တည်ရှိ၏အခါအထူးသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ဘို့စိတ်ကိုပြင်ဆင်အဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်အကျိုးရှိပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ဘက်မှာလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကပညာတတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်, မဆိုင်းမတွမှဦးဆောင်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ခက်ခဲစဉ်းစားရန်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ရန်ပွဲတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ကွောကျခွငျးအားဖွငျ့အကြောင်းကိုယူဆောင်ဖြစ်ကြောင်း Self-န့်အသတ်တားဆီးဖို့သင့်ရက်ပေါင်းပြန်စီရန်သင့်အားလိုအပ်နိုင်ပါသည်တဲ့ရာသက်ပန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
စိုးရိမ်စိတ် neurotransmitter နှင့်ထိုကဲ့သို့သော nootropics သိသိသာသာလမ်းအတွက်ကူညီပေးဖို့လူသိများကြသည်အဖြစ်သိမြင်မှုပြဿနာများ၏ရလဒ်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သော nootropic ကြောင့်မည်သည့်အပိုဆောင်း excitatory လှုပ်ရှားမှုတန်ပြန်ဖို့ဦးနှောက်ကိုပိုမိုဂါဘမြို့သားရရှိနိုင်ပါစေကူညီပေးသည်သောသိမြင် Enhancer နှင့်တစ်ဦး anxiolytic အေးဂျင့်ဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရ Fasoracetam ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်များချောမွေ့, ယုံကြည်မှုနှုတ် fluency ဖန်တီးအဖြစ်ပိုပြီးလူမှုရေးဖြစ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်။
မြောက်မြားစွာသည်အခြား pharmacologic အေးဂျင့်များနှင့်ဆင်တူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျသျောလညျး, Fasoracetam ဝေးသောအများကြီးပိုကောင်း option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါ inducing anxiolytics အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည် Fasoracetam ကိုသုံးပါ အဲဒါကိုစွဲလမ်းစေပေမယ့်မှီခိုဘို့သုညသည်းခံစိတ်နှင့်အတူကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပေါ်စေသည်တော်မမူကြောင်းဝန်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဂါဘမြို့သားများနှင့် glutaminergic လမ်းကြောင်းမျှတတဲ့အခါ, ထို့နောက်အလွန်အကျွံထိနမိဒ္ဓများနှင့်သက်သာခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနေကြသည်။
မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သင်ပင်အကျွမ်းတဝင်အမှုအရာသို့မဟုတ်လူတွေမှတ်မိလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါအတော်လေးစဉျးဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ယုံကြည်မှု, ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လွတ်လပ်ရေးအကူအညီမဲ့ feeling ဤအရပ်မှလျှော့ချနေကြသည်နှင့်တူခံစားရပေမည်။ Fasoracetam တဦးတည်းစိတ်ပိုင်းချွန်ထက်နေအဖြစ်အနိမ့်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကူညီလူသိများသည်။
သုတေသနကြွက်အပေါ်ပြု Fasoracetam baclofen ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ပြဿနာတွေ, အဂါဘမြို့သား-B ကအဲဒီ receptor တစ်ခု Active ကာကွယ်တားဆီးဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအစ acetylcholine ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နှင့်ဂါဘမြို့သား-B က၏ activation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအသေးအဖွဲအားဖြင့်သတိမေ့ခြင်းလျှော့ချရန်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန်တွင်ပြီးတော့သင်ကသိမြင်မှုထပ်တိုးရသင့်တယ်, လှုံ့ဆော်မှုရှိနေဆဲချင်တယ်။ ယနေ့အများအပြားမူးယစ်ဆေးကြောင့်အောင်မြင်ရန်တဦးတည်းကူညီပေးဖို့ကတိပေးပေမယ့်အလွန်နည်းပါးကယ်နှုတ်တော်မူ။ Nootropic ဖြေရှင်းချက်ကတိပေးမသာပေမယ့်သူတို့ကအထူးသဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်အပေါ်အံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များကိုပေး။ သိမြင်မှုစွမ်းရည်များအတွက်တိုးတက်မှုသင်ပိုကောင်းရည်ရွယ်ပေမယ့်လည်းကျယ်ပြန့်အမြင်နှင့်ရှုထောင့်ရှိနိုင်ပါသည်သာဆိုလိုသည်။
တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုမိစမ်းသပ်မှုဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်, သူတို့ကပိုဖန်တီးမှုဖြစ်လာကြောင်းပြသပါ။ သူတို့ကယခုဖြည့်စွက်ယူမီသူတို့တတျနိုငျသထက်ပိုပြီးကိုင်တွယ်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ အလားတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဖြစ်ပျက်။ တစ်ခုမှာမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်တာဝန်များအောင်မြင်ရေးအပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးတဦးတည်းကိုသူတို့မရောက်မီပြုပိုကောင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးထိရောက်လမ်းအတွက်ဘဝနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးသည်။
ဤသည် nootropic ကတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်လန်းဆန်းကစောင့်ရှောက်ခြင်းဤအရပ်မှသင့်ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို restart အတွက်ကူညီနိုင်ကတည်းကလှုံ့ဆော်အဖြစ်အကြီးအအလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ အဆိုပါ Fasoracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မှစ. သင်သည်များစွာသောလူများကပေးလန်းဆန်းခံစားမှုကိုချစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်ပါတယ်။
4. Fasoracetam ၏အကြံပြုသောက်သုံးသော
ADHD ဝေဒနာရှင်အပေါ်ပြုမိနေတဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် 100, 200 နှင့် 400 မီလီဂရမ်၏ဆေးညွှန်းနှုတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ နေရာအများစုအများစုအသုံးပြုသူများအ Fasoracetam နေ့စဉ် 100-800mg အကြားတစ်ဦးသောက်သုံးသောမှာထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Fasoracetam သင်တို့ကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်း 5-15mg အကြားတစ်ဦးထိုးအကွာအဝေးနှင့်အတူလျှာအောက်မှာထားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက, sublingually ယူနိုင်ပါသည်။
သက်ရောက်မှုဖက်ကရန်သင့်အားလက်အောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းမြင့်မားသော Fasoracetam သောက်သုံးသော, သင်တစ်နေ့ 100mgs ယူနိုင်ဘူး။ က Fasoracetam ယူပြီးသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်အကျိုးရှိစွာကြောင်းသေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးဘို့ရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါအကြံပြုတစ်ဦးကိုအနည်းဆုံးသုံးဆေးများကိုတစ်နေ့ယူပြီးထိုးနှုန်း 10-15mg ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 30-50mg တစ်ရက်ထိုးမှတက်ကထပ်ပြောသည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးသည်းခံနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းပြီပြီးတာနဲ့, သင်ထို့နောက်သင့်သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ သငျသညျလွန်းယူဖို့သတိထားပါဖြစ်ဖို့ရှိသည်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်အကျွံသုံးစွဲ, ပျို့ခြင်းနှင့်အန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
Fasoracetam ယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မဆိုမုန့်ညက်ကိုယူပြီးရှေ့တော်၌ထိုနံနက်၌တည်ရှိ၏။ အများဆုံး Faracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အဲဒီအခြိနျမှာပိုကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပြောဆိုကြသည်။ အိပ်ရာမှရတဲ့ရှေ့မှာရိုက်ယူခြင်းလည်းအိပ်စက်ခြင်းကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေသငျသညျပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဟောင်းနှင့်လုလင်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါ Fasotaretam လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလူကြီးများကသူတို့ system ထဲကနေမူးယစ်ဆေးကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်သို့ရာတွင်ထိုသို့ပိုပြီးတိုးချဲ့ကာလကြာပါသည်။ တစ်နိမ့် Fasoracetam သောက်သုံးသောအပေါ်ငယ်ရွယ်သောသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်သူတို့ကအစပိုမိုမြင့်မားသောအသွေးကိုအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။
ဒီ nootropic မကြာခဏဆေးညွှန်းရှိပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေအစာရှောင်ဖယ်ထုတ်ပစ်ရရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်သောတိုတောင်း Fasoracetam တစ်ဝက်-life ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် Fasoracetam တာကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်တချို့လူများကသီးနှံများကိုပုံမှကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မည်။ stacking နေစဉ်, သငျသညျအတူတူကတခြားတွေနဲ့ Fasoracetam ယူ nootropics။ ရလဒ်အဖြစ်သင် Fasoracetam stack ကနေပိုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမို brainpower တိုက်ဖျက်မည်နိုင်ပါတယ်။
ဤသည် stack ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အကြောင်းပြချက်များအများဆုံးဖြစ်ပွားထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျနှစျယောကျဖြည့်စွက်တွဲတစ်ပြိုင်နက်ဤအရပ်မှအသုံးပြုသူတစ်ဦးအကောင်းဆုံးခံစားမှုပေးခြင်းဦးနှောက်ထဲမှာ acetylcholine ၏ပမာဏအတွက်သိသိသာသာတိုးလည်းမရှိ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ coluracetam သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတိုးမြှင့်မည်နေစဉ် Fasoracetam ကိုအကောင်းဆုံးဂါဘမြို့သား-B ကရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သိသိသာသာသင့်ရဲ့အာရုံပေါ်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ coluracetam, Fasoracetam stack အာရုံကြောချို့ယွင်း, ခံစားချက်တိုးမြှင့်ခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကူညီရန်ဟုဆိုသည်။ သငျသညျအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်မျှတသငျသညျစောငျ့ရှောကျပါမညျတစ် stack ချင်လျှင်, သင်ဤ stack ယူပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၎င်း၏သောက်သုံးသောကပါဝင်ပတ်သက်; 15mg Fasoracetam (110958-19-5) နှင့် 10mg Coluracetam တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ယူ။
အားလုံးသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အာရုံစိုက်တိုးပွားလာနေသည်လျှင်, ဤအတွက်အကောင်းဆုံး Fasoracetam stack ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Fasoracetam (110958-19-5) နှစ်ဦးစလုံးနှင့် Noopept တစ်သရုပ်ြပအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးရန် choline နေဖြင့်တိုးမြှင့်ရ။
ဒီ stack ယူပြီးနှင့်တကွကြွလာသောအားသာချက်ကသိမြင်မှုအာရုံနှင့်အတူကူညီပေးသည်နှင့်နိူးစနှော feeling ကိုသင်စွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲခွအေနမြေားအသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်နေ့ကအာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ stack အဘို့, ဒီဟာအကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။
(3) Fasoracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုကြာချိန်
သငျသညျ၎င်းငျး၏အသုံးပြုမှုသုံးဆယ်မိနစ်ပြီးနောက်ကုထုံး Fasoracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ sublingually ယူသောအခါ, လျင်မြန်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုပြုပြင်, သင်ရုံဆယ်မိနစ်အတွင်း Fasoracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်ရှစ်နာရီကြာရန်သင့်အားဖွင့်ကြာရှည်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ Fasoracetam ဝက်ဘဝနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးနာရီဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုပြုံနေဆဲဖြစ်သည်။
(4) မူးယစ်ဆေး interaction က
Fasoracetam ၏ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါများစွာသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမရှိပါ။ ကနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသောမူးယစ်ဆေး phenibut, ဂါဘမြို့သား receptors ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏသိမြင် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။
Fasoracetam ဂါဘမြို့သား-B က receptors ၏ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် phenibut မှသည်းခံစိတ်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် phenibut တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူရောဂါပြီသို့မဟုတ်သင်သတ်မှတ်ဆေးဝါးအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင် Fasoracetam ယူမီပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်မှပြောနေတာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည်မူးယစ်ဆေးနဲ့ဝေးဝေးထားရန်အကြံပြုပါသည်။ ကျား, မသင်ဤဖြည့်စွက်မဟုတ်ပါဘူးယူနိုင်ပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပါဘူး; သို့သော်အလေးချိန်တစ်အဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
5. Fasoracetam ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
ဒါဟာတိုင်းစားသုံးမိသောဥစ်စာနှငျ့တစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိလိမ့်မည်ကြောင်းပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသို့သော်လုံခြုံဖြစ်လူသိများသည်, သင် Fasoracetam သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တခါသငျသညျခဲ Fasoracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်နှင့်ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးထိုကွောငျ့သငျတို့အခြားလူများမဆို Fasoracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံကြဖို့မအစီရင်ခံတင်ပြကြလျှင်ပင်မဆိုအကျိုးသက်ရောက်ထံမှခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမအာမခံချက်ရှိကွောငျးကိုသတိပြုပါကြောင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ တချို့ကအချိန်နှင့်အတူသွားစေခြင်းငှါမယ့်ပုံမှန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုများမှာ, ဒါပေမဲ့သူတို့တည်လျှင်, သင် Fasoracetam အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းနိုင်ဘူး။
Fasoracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ခံစား၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအချို့သောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်နှင့်သင်ဤ nootropic အသုံးပြုလမ်းပြင်းထန်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ အလွန်အကျွံသုံးစွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏မူလတန်းအကြောင်းတရားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရမ်းမကြာခဏအလွန်အကျွံဖြည့်စွက်ရိုက်ယူခြင်း Fasoracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သာမှအပြုသဘောရလာဒ်များအရ, သင်သာလုံလောက်သော Fasoracetam သောက်သုံးသောယူရန်အကြံပြု; မဟုတ်ရင်, သငျသညျဤအရပ်မှမလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများထွက်လာပါတယ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်ကိုမြားမြားတက်အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။
ဤတွင်အစီရင်ခံထားဘူးသော Fasoracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုပါ၏
အစာအိမ်နှင့်အူနှောင့်အယှက်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခ, ဆိုလိုသည်မှာ, ဝမ်းလျှော, ချုပ်, ဖောင်းနှင့်ပျို့ချင်များစွာသောလူထံမှခံရဖို့အခိုင်အမာပြီအများဆုံးမကြာခဏဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီကနေခံစားနေရပြီးထံမှသင်တို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့, လက်ျာသောက်သုံးသော ယူ. အမြဲအရည်အသွေးမြင့်မားကြောင်း Fasoracetam ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကပိုပြင်းထန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့သင်ကဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သူတို့ကဦးနှောက်ထဲမှာ choline သိုက်ကွယ်ပျောက်သွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်သောကြောင့်ခေါင်းကိုက်သည့် racetam nootropics နှင့်အတူဘုံဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဝေဒနာမကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါသည်ပေမယ့်ခေါင်းကိုက်နှင့်အတူအဝေးလုပ်ဖို့, သင်ကယူနိုင်ကြောင်း Fasoracetam stack တစ် choline အရင်းအမြစ်, ဥပမာအာလဖ GPC ရှိပါတယ်။ မှားသောက်သုံးသောနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏မမှန်ကန်ကြောင်းအကြိမ်ရေယူပြီးလည်းဦးခေါင်းကိုနာကျင်ကိုက်ခဲကြုံနေရခြင်းဖြင့်မှတ်သားသည်, သငျသညျ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်လက်ျာ Fasoracetam သောက်သုံးသောယူကြောင်းသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ရှိခြင်းလျှင်ဦးနှောက်ကိုပြန်ညှိရန်ကူညီပေးသည်ကြောင့်၎င်း, တစ်ဦးမှေးယူပါ။ သငျသညျလညျးသငျယူသောရေပမာဏတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီတျရှုပျထှေးထံမှခံရနိုင်ပြီးချက်ချင်း Fasoracetam မျိုမိပြီးစနစ်တကျသူတို့ရဲ့အတှေးအစည်းရုံးနိုင်မည်မဟုတ်ပါပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါကောင်းသောအရာခံစားချက်တချို့အချိန်ပြီးနောက်ပြေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
lightheaded ဖြစ်လာခြင်းသည်လည်းလူများကသုံးပြီးပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်အပေါ်ထံမှခံရသတင်းပို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာ lightheadedness အကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ဖြည့်စွက်သုံးပြီးပြီးနောက်ပြေကြောင်းပြောဆိုထားသည်ပါပြီ။
အခြားသူများကိုဤမူးယစ်ဆေးအဆိုးလိင်စိတ်လျှော့ချနှင့်၎င်းတို့၏ orgasm လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏လိင်ဘဝကိုထိခိုက်ဟုဆိုသည်။ ဖြည့်စွက်ဒီ Fasoracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ပြန်ကူညီနိုင်တိုးမြှင့်လိင်အသုံးပြုခြင်း။
သငျသညျ Fasoracetam ၏အလွန်မြင့်မားဆေးများယူပြီးတာနဲ့ကိုသင်အိပ်ပျော်ရာမရှိခြင်းကနေဆငျးရဲခံရပေမည်။ ဒါကသင်သံကိုအိပ်စက်ခြင်း get ကူညီပေးသည်အတိုင်းအကြံပြုသောက်သုံးသောယူရန်အကြံပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
6.User ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Fasoracetam အသုံးပြုခြင်း၏အတွေ့အကြုံ
သင်သည်သင်၏ Fasoracetam ထိုးစတင်အကြောင်းကိုဤမျှစိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းငှါနေစဉ်, သင်ကအတိတ်ကာလကအသုံးပြုခဲ့ကြသူလူများထံမှအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်သိရန်လိုပေမည်။ အခြားသူများကို, သူတို့က၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်နိုင်ပါသည်သူတို့ကိုတစ်ဦးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အဘို့အအခြားသူတစ်ဦးရဲ့ပုံပြင်ကိုနားထောင်ချင်မှနားထောင်လိမ့်မယ်။ ဒီအကူအညီသင်သည်သင်၏စိတ်ကိုအနည်ထိုင်ပေမယ့်သင် Fasoracetam သွားကြဖို့လမ်းကိုကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးသည်လိမ့်မယ်မသာ။
အတိတ်ကာလ၌, Fasoracetam အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိရောက်စွာများစွာသောလူကအသုံးပြုခဲ့ပြီး, ထိုသို့အသုံးပြုသောဘူးသောသူတို့၏အမျိုးအအများစုအများအပြားသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးသူတို့ကဒီ nootropic လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသိကြှမျးသောဆန္ဒရှိကြောင်း ကိုးကား. နှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောအတှေ့အကွုံခဲ့ပါပြီ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ client များထံမှဆည်းပူးင့်သော Fasoracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတချို့ရှိနေပါတယ်
Luli လအနည်းငယ်အကြာကျွန်မမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့အသက်ကိုပဲအများဆုံးစိတ်ရှုပ်စရာအခိုက်ခဲ့သည် "ဟုဆိုသည်။ ငါအချို့ဆရာဝန်များကသွားရောက်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့ထံသို့ပေးသောဆေးဝါးများအဘယ်သူအားမျှအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ငါဒါဝမ်းနည်းပက်လက်ခံစားခဲ့ရနှင့်ဤစေပြီနိုင်သောအရာကိုအံ့သြနေခဲ့တယ်။ ကိုယ့် 30 ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါတောင်ငါ့မိတ်ဆွေရဲ့အမည်များကိုမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အလုပ်မှာအကြှနျုပျ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငါ Fasoracetam သုံးပါနဲ့ကျွန်မအကူအညီတောင်းအလွန်အပူတပြင်းခဲ့စဉ်ကတည်းကသူမထိုနေ့ Phcoker.com မှာငါ့အဘို့ကအမိန့်ထုတ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ လေးပတ်အတွင်း, ငါ့မှတ်ဉာဏ်လွန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါဒါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မလုံလောက်ပါကဤအံ့သြဖွယ် site ကိုကျေးဇူးတင်လို့မရဘူး။ ယခုကဲ့သို့ငါနီးပါးအရာအားလုံးကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်းငါတောင်မှဖို့ရည်ရွယ်မဟုတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုပစ္စည်းပစ္စယမှတ်မိနိုင်သောပြောကြပါတယ်။ ငါမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုခံစားနေရပြီးသူမည်သူမဆိုမှ Fasoracetam အကြံပြုလိမ့်မယ်။ "
Juan ငါ့သား ADHD ခံစားနေရပြီးခဲ့ပြီး, သူ၏ဆရာဝန်အများအပြားဆေးဝါးများအောက်မှာသူ့ကိုထားဖူး "လို့ပြောပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေတော်မူသည်နှင့်ဤအကြှနျုပျကိုခြီအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကဒီအခြေအနေပေါ်တွင်သုတေသနနှင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းလုပ်နေတာအများအပြားနာရီပေါင်း။ ကံကောင်းတာကငါသည်ငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိကြောင်းကောင်းတစ်ဦး Fasoracetam ပြန်လည်သုံးသပ်အနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။ ငါကအမိန့်, ငါတို့ Fasoracetam အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆေးကြောငျးတှငျအကြှနျုပျ၏သားကိုကူညီပေးခဲ့တယ်, သူသည်ယခုပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ကိုအချို့အပြောင်းအလဲများကိုသတိပွုမိစတင်ရန်သုံးပတ်ကို ယူ. , ငါ Fasoracetam အကြောင်းကိုသိရန်ရတယ်ဒါမှဝမ်းသာပါတယ်။ သငျသညျတူညီသောပြဿနာရှိခြင်းနိုင်လျှင်, ငါကကြိုးစားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းလိမ့်မယ်။ "
Bai ဆင်းရဲသောသူသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆုတ်နစ်အလုပ်မှာငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဘယ်ကြောင့်ငါမသိရပါဘူး "ဟုဆိုသည်။ ကျွန်မအလုပ်မှာဖြစ်ခြင်း၏နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အကြှနျုပျ၏အကြီးတန်းဝေဖန်ခံရအပေါ်စောင့်ရှောက်လျှင်, ငါအကူအညီကိုရှာရတယ်။ အချို့သောအချိန်များအတွက် Fasoracetam သုံးပြီးပြီးနောက်, ငါသညျကောငျးခံစားရတယ်။ ငါသရုပ်ြပခံစားရပါတယ်, ငါ့အာရုံနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါသည်ငါ့ဦးနှောက်ကို overworked တဲ့နေသည်နှင့်တူခံစားခြင်းမရှိဘဲတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိတျကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အတိုဆုံးအချိန်အတွင်းတာဝန်ပေးအပ်ယခုတွင်ငါသည်ပြည့်စုံတာဝန်များကို။ ငါက Unreal အသံကိုသိပေမယ့်အလုပ်မှာလူတိုင်းငါသုံးပြီးပြီအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုတောငျးဆိုသည်။ သူတို့ရန်အသုံးပြုကြပြီးယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်သမားအဖြစ်ငါ့ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းသကဲ့သို့သူတို့မရှိတော့ငါ့ကိုပျင်းရိအရိုးကိုခေါ်ပါ။ ဒီဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုသံသယဖြစ်ပြီးသူမည်သူမဆိုအဘို့ငါအပေါ်အခြေချရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ် Fasoracetam ဝယ်ယူ သင်ဖြုန်းမည်အကြောင်းရှိသမျှ Dime တန်ဖိုးရှိကြောင့်။ "
Chen ကငါကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် Phcoker.com ကိုအသုံးပြုကြပါပြီ, လူအပေါင်းတို့အခါသမယတွင်, ငါအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုခံစားကြပါပြီ "ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာနှင့်သူ၏ဝယ်ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးသည်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရှိကြောင်းတစ်ခုတည်းသော်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှခဲ့, ငါအမြဲအချိန်အပေါ်မှာငါ့အထုပ်ခံယူစရာမလိုတော့ဘူး။ Phcoker သူတို့ရဲ့အလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့နေရာတစ်ခုကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အတူသူတို့ကိုယုံကြည်ကိုးစား, ငါပဲ Fasoracetam အဘို့အမိန့်ထုတ်, ငါ, ငါ့ Fasoracetam အတွေ့အကြုံကိုအပြုသဘောပါလိမ့်မည်သေချာထက်ပိုဖြစ်၏။ ငါတစ်လအတွက်ကဒီမှာငါ့အ Fasoracetam ပြန်လည်သုံးသပ် post ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖြည့်စွက်ဝယ်ယူနှင့်သင့်ငွေရကျိုးနပ်လာပြီမငြီးငွေ့နိုင်လျှင် Phcoker.com သင်တို့အဘို့ go ဆိုက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ "
ပန်ကာနောက်ဆုံးစာသင်ငါပျော့သတိမေ့ခြင်းနှင့်အတူရောဂါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့စာမေးပွဲကျရှုံးစေခြင်းငှါ, ကြောက်ရွံ့ရိုသေ "လို့ပြောပါတယ်။ ငါစာသင်လျှောက်လုံးဒါကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီးနောက်ပျက်ကွက်စိတ်ကူးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအလေးပေးခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏အတန်းဖော် Fasoracetam ဖို့ကျွန်မကိုမိတ်ဆက်, ငါ ထိုအချိန်မှစ. ပြန်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်။ အကြှနျုပျ၏စိတျပိုငျးဆိုငျရာစှမျးဆောငျရညျတိုးတကျခဲ့, ငါအတန်းအစား၌ဆုံးမဩဝါဒနီးပါးအရာအားလုံးကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုနောက်ဆုံးစာသင်မယ့်ရလဒ်တွေကိုရတယ်, ငါကျောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းငါဒါကောင်းစွာဖျော်ဖြေဖူးပါဘူး။ ကျွန်မဦးနှောက်မြူတွေ့ကြုံခံစားကြဘူး, ဤဖြည့်စွက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာသည်။ အကြှနျုပျ၏ Fasoracetam အတွေ့အကြုံကိုပဲမော်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်! "
Jinhai ကျွန်မရဲ့အစ်ကိုစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အပြင်းအထန်နှင့်မကြာသေးမီကသူသတ်သေဖြစ်ခြင်းစတင်လိုက်ပါပြီ "ဟုဆိုသည်။ ဘာမျှမထိရောက်သောဖြစ်သလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မိသားစုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုညှစ်။ လူအားလုံးတို့သည်ကုထုံးနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်နဲ့တူသလိုပဲ။ အခြားသူများကိုသိုင်းရွိုက်ပြဿနာများခံစားနေရပြီးသူ့ကိုထွက်ခွာစဉ်ကသူ့ဆေး၏အချို့တစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တူညီသောခံစားနေရပြီးသူကသူ့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအပြုသဘော Fasoracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ပေး၏တိုင်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအချိန်မှစ. အမှုအရာသည်ယခုအခါန်းကျင်တစ်ဦးအလှည့်ယူကြပြီ။ ဒါဟာသူဆေးဝါးတာစတင်ခဲ့ကတည်းကသာတစ်လနှင့်စိုးရိမ်စိတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိသေး၏။ သူဟာမရှိသလောက်အတွေးများကိုပြိုင်ကားရကြောင်းဝန်ခံသည်နှင့်သူ၏အိပ်စက်ခြင်းအတော်ပင်။ ဒီတော့ဝေးကသူ့အလေ့အထပိုကောင်းဖို့အတွက်ပြောင်းလဲကြပါပြီ, ကြှနျုပျတို့ Fasoracetam အားလုံးကိုကြောင်း attribute နိုင်တယ်။ "
ဇွန်တစ် Fasoracetam ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ဝယ်ယူရန်နှင့်ဘာသာရေးအရကယူပြီးဆောင်ရွက်ပြီးနောက်, ငါကငါ့ထံသို့အများကြီးအကူအညီ၏ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုပြောဝမ်းသာတယ် "လို့ပြောပါတယ်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်သိသာတိုးတက်မှုခံစားကြပါပြီ, ငါယခုငါက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမစတင်မီခံစားရဖို့အသုံးပြုထက်ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းခံစားရသည်။ အကြှနျုပျ၏စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ကိုတက်ကြပြီ, ငါမရှိတော့ပင်ပန်း feeling နှိုး။ တောင်မှပိုကောင်း, ငါသည်ယခုလပ်ချိန်ယူ၏လိုအပ်မှုကိုဘဲငါနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များပိုမိုပြီးမြောက်နိုင်ပါ၏။ 60 မှာငါစိတ်ချလက်ချငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌ကောင်းမွန်သောဤခံစားခဲ့ရဖူးဘူးဟုပြောနိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနေ့ကရှိခြင်းပြီးနောက်ကလေးနှင့်တူအိပ်မေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါခြောသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်တိုးတက်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူမည်သူမဆိုပြုလုပ်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ "
လူတိုင်းသူ / သူမထက်ပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ခြင်းမျှော်ကြည့်။ တောင်မှမရအချိန်ကြာမြင့်စွာသော်လည်း, တိုတောင်းတဲ့အခိုက်အဘို့အလိမ္မာပါးနပ် feeling တဦးတည်းရဲ့ Self-လေးစားမှုတိုးတက်အောင်၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ Fasoracetam အမှုန့်ကျောင်းသားများအကြားမသာရေပန်းစားသည်, သို့သော်လည်းထိထိရောက်ရောက် multitask နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးချွန်ထက်သောစိတ်ကိုရှိသည်ဖို့လိုတဲ့သူတခြားလူတိုင်းနေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင်, ရှေ့ဆက်တခြားသူတွေရဲ့ဖြစ်သူတို့အတွက်ယူသောအရာကိုပိုပြီးထိန်းသိမ်းထား, သူတို့မှတ်မိဖို့လိုအပ်သမျှကောင်းတစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်ဖို့လိုလားတဲ့သူတိုင်းလူတစ်ဦးကဒီ nootropic ဘာမှအကြိုးခံစားနိုင်ဘူး။ ဤထည့်သွင်းဖို့, Fasoracetam ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောရောဂါနှင့်အခြေအနေများကိုအချို့နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။
Fasoracetam သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မဆိုဂြိုလ်သားဝင်းမိတ်ဆက်ပေးမထားဘူးစိတ်ကိုထားရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ acetylcholine ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အလွန်သော့ချက်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည့် choline ပေးပါသည်။ ဒီဖြည့်စွက်မှသာကိုယ်အဘို့ကောင်းသောဆိုလိုတယ်သောသင်ဆွဲဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ သို့သျောလညျး, သငျသငျသညျအသှေးကိုထုတ်ကုန်အာမခံပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချကုန်သည်ရရန်လိုအပ်သည်။
ဒီ nootropic ပေးသည်သမျှသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသင် Fasoracetam မဝယ်နိုင်ဘယ်မှာသိရန်လိုပေမည်။ ကံမကောင်းစွာပဲလူများစွာသည်သင်တို့ထံကလွယ်ကူသောငွေရှာချင်တယ်, သင်ထို့ကြောင့်အတုကြောင်း Fasoracetam ဝယ်ဖို့ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သောသင်လိုချင်သောရလာဒ်များမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ တံဆိပ်ပေါ်တွင်မှတ်သားအဖြစ်အခြားသူများကိုလက်ျာဘက်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်စဉ်တချို့က Fasoracetam အမှုန့်မပါဝင်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သာငွေစွန့်ပစ်ကြလိမ့်မည်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသည်လျှင်ပင်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းငှါ, သင်ကသွားလာရင်းမှကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင်အွန်လိုင်း Fasoracetam ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာသိရန်သင့်၏။
ဒါကြောင့်သင်က, ထို့နောက်သင်အွန်လိုင်း Fasoracetam ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာ site တစ်ခုရှာနေလျှင် Phcoker.com ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏လုပျနိုငျတဲ့စိတျခရြ်ဆိုက်များမှာ Fasoracetam ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စျေးကွက်အတွင်းအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်တန်းရ။ Binder နှင့် Filler အတူ Fasoracetam အမှုန့်ရောစပ်အားဖြင့်သင်တို့ကို dupe စေခြင်းငှါအခြား site မတူဘဲ, ငါတို့ 100% စစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့က၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်အရည်အသွေးမထိခိုက်စေဘဲဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာ Fasoracetam အားဖြင့်သင်တို့ကိုမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site များတွင်ငါတို့သည်လည်းပူဇော် အမြောက်အများ nootropic မှုန် ဖော်ရွေစျေးနှုန်းများမှာရောင်းမည်။ သငျသညျစျေးသက်သာအဆင့်ကိုဝယ်ပေမယ့်အမြဲညစ်ညမ်းမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်ကုန်ဟာစျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, အဆိုပါအာနိသင်နိမ့်နှင့်အမြင့်မားကြောင်းသတိပြုပါရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရကျိုးနပ်ကြောင်းတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အာမခံ, ငါတို့ထုတ်ကုန်သုံးပြီးပြီးနောက်, သင်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာရလဒ်ကြုံနေရစတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူနှင့်တကွကြွလာသည်ဟုနောက်ထပ်အားသာချက်ကျနော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်ပေါ်ပေးပို့စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်တိုဆုံးရေကြောင်းအချိန်အတွင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့ကှကျရလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်လည်းဝယ်စိတ်ဝင်စားလျှင် အမြောက်အများ nootropic မှုန်ထို့နောက်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအပေးအယူတယ်။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ထံမှ Fasoracetam Buy နှင့်တစ်ဦးပိုမိုတိုတောင်းသောကာလ၌နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်တာဝန်များကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်သင့်ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်။
Merchan, C တို့, မော်ဂန်, R. , Papadopoulos, ဂျေ, & Fridman, ဃ (2016) ။ Fasoracetam နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက် Phenibut အလွန်အကျွံသုံးစွဲ: အလွဲသုံးမှုများလွန်မြောက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ လက်တွေ့ Intensive စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆေးပညာ, 1, 001-004 ၏ဂျာနယ်။
Elias, ဂျေ, Ungal, G. အ, Kao, C တို့, Ambrosini, အေ, ယရှေု-Rosario, N. , Larsen, L. ... & Sykes, ခ (2018) ။ ADHD နဲ့ glutamatergic ဗီဇကွန်ယက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် Fasoracetam mGluR neurotransmitter အချက်ပြကမောက်ကမဖြစ်စေရန် variants ။ သဘာဝတရားဆက်သွယ်ရေး,9(1),4။
Harmsen, ခ, Robeyns, K. , Wouters, ဂျေ, & Leyssens, တီ (2017) ။ Fasoracetam ရဲ့ Solid State ပုံစံတစ်ဦးကလေ့လာမှုမြား: A နိုင်သည့်အလားအလာ, Anti-အယ်လ်ဇိုင်းမားဆေးဝါး။ ဆေးဝါးသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 106 (5), 1317-1321 ။